Agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus oo ka hadlay wararka ku aadan inay lasoo saxiixan doonaan Cristiano Ronaldo – Gool FM
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Juventus oo ka hadlay wararka ku aadan inay lasoo saxiixan doonaan Cristiano Ronaldo
(Juventus) 04 Luulyo 2018. Agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Giuseppe Marotta ayaa wuxuu iska diiday inuu ka hadlo wararka lala xiriirinayo in suuqan xagaaga ay la soo saxiixan doonaan kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo.
Waxaa jira warar ku aadan in kooxda Juventus ay kulasoo saxiixaneyso kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo aduun dhan 100 million euros.
Wararka ayaa waxay intaas kusii darayaan in Cristiano Ronaldo uu sanadii mushaar ahaan u qaadan doono aduun dhan 30 million euros isla markaana uu qalinka ku duugi doono heshiis gaarsiisan ilaa iyo 4 sano.
Hadaba agaasimaha ciyaaraha ee kooxda Juventus Giuseppe Marotta ayaa mar wax laga weydiiyay arinta ku aadan in ay lasoo saxiixan doonaan Cristiano Ronaldo inta uu dhoola cadeeyay wuxuu kaga jawaab celiyay “Faallo la’aan”.
Liverpool oo isha ku heysa saxiixa difaaca kooxda Barcelona Yerry Mina
Matthaus oo weerar ku qaaday Neymar Jr sababa la xiriira jiliinkiisa joogtada ah uu ka sameenayo gudaha garoonka